Inona ireo fiverenana eo amin'ny raharaham-barotra ary inona ny lanjany azon'izy ireo atolotra anao?
Ao amin'ny tontolo an-tserasera amin'izao fotoana izao, ny backlinks momba ny raharaham-barotra dia mpanohana ny antoko. Mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny aterineto izy ireo ary manamboatra tranonkala hita ho an'ny milina fikarohana. Ny fanentanana fanentanana fikarohana rehetra dia afaka manao tsy misy fanorenana rohy.
Aoka hatao sary an-tsaina kokoa ny toe-javatra iainantsika. Mipetraka eo am-baravarankely ianao ary mandre fa misy olona miresaka anao. Raha mpahafantatra io mpandahateny io ary manoritsoritra anao amin'ny fahazavana tsara, dia manintona tsara anao izany ary mitondra laza sy fahefana anao - the seed bin. Ireo olona mandre io vaovao io dia manomboka mieritreritra tsara kokoa momba anao. Ary ny mifamadika amin'izany, raha toa ka misy olona iray misongadina dia mandà tsy hifandray aminy ny olona.
Amin'ny tsena dizitaly, rohy mankany amin'ny tranonkala mendrika sy azo itokisana dia ekena ho hatsarana. Amin'ny fifandraisanao amin'izy ireo, dia milaza ny mpampiasa azy izy ireo ary mikaroka botsara fa manaja ny zavatra lazainao na ataonao ry zareo. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia lasa vato avy amin'ny loharano azo itokisana ireo rindran-kaonty ireo ary mampiakatra ny lazanao.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny zava-drehetra momba ny backlinks momba ny raharaham-barotra ary nahoana izy ireo no mahasoa ny fanatsarana ny fikarohana.
Inona ny fiverenana eo amin'ny raharaham-barotra?
Araka ny toro-marika avy amin'ny olon-tiany sy akaiky dia ny endri-panamboarana azo itokisana indrindra, ny fiverenan'ny raharaham-barotra ambony dia manana ny lanja ambony indrindra amin'ny fampiroboroboana ny orinasa.
Eo am-pijerena ny fitaovam-pitadiavana, ny backlinks avy amin'ny tranonkala hafa dia toy ny vatom-pifidianana ary miresaka momba ny kalitaon'ny loharano web. Na izany aza, ny fitaovam-pitadiavana dia manamarina izany fiheverana izany ao amin'ny algorithm SEO sy PageRank.
Amin'ny ankapobeny, ny rohy avy amin'ny tranonkala iray hafa ho an'ny tranokalanao dia heverina ho toy ny backlink'ny orinasa. Na izany aza, raha toa ka avy amin'ny loharanom-baovao sy tsiro madinidinika ny rohy, dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny toeran'ny habaka izany ary handrava ny ezaka fanatsarana ny fikarohana. Izany no antony tokony hikatso ny lisitry ny raharaham-barotra momba ny varotra.
Iza amin'ireo lafiny ireo no jerena amin'ny Google?
Tato ho ato, ny webmasters dia nahatonga lantoka ho an'ny backlinks raharaham-barotra sasany. Nampiasa fomba isan-karazany izy ireo hampitombo ny isan'ny rohy ivelany. Ny sasany amin'ireny fomba ireny dia nahitana spammy sy hosoka toy ny fambolena fambolena, tambajotra bilaogy tsy miankina, spam, sy ny sisa.
Na izany aza dia takatr'i Google fa tsy nisy dikany sy azo itokisana ny sasantsasany amin'ireo rakitra. Izany no antony, nanapa-kevitra izy ireo hanitsy ny fanitsiana ao amin'ny algorithms momba azy ireo, mahatsapa ny hatsaran'ny rohy ivelany fa tsy ny habetsahany. Taorian'ny fikatsahana farany ny Google Panda, maro ireo tranonkala no namoy ny toerany.
Maro no nanaiky fa manamarika ireo hevi-dehibe marobe ireo ny milina fikarohana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanisa efatra amin'ireo isika izay miresaka momba ny fikarohana momba ny fikarohana momba ny kalitao tsara. Mila mandinika azy ireo ianao rehefa mikaroka ny fifandraisana vaovao amin'ny fifandraisana vaovao na hamerenana ny mombamomba ny rohy.
Andramiantsika ny sasantsasany amin'izy ireo:
Repoblika sy fitarihana
Ny lafiny manan-danja amin'ny backlinks dia laza. Mifamatotra akaiky amin'ny fitarihana izy. Izany no mahatonga ny fotoana isaky ny mitady ny fifandraisana vaovao amin'ny fifandraisana vaovao, azonao antoka fa hisy tranonkala ahafahanao mampifandray rohy dia fantatra sy tena ankasitrahan'ireo mpampiasa azy ary koa hajaina ao amin'ny tontolo tena izy.
Ny votoatin'ny tranonkala dia tokony hanana zavatra ifandraisany amin'ny raharaham-barotra. Ireo algorithm SEO dia mihevitra ny maha-zava-dehibe ny fisorohana ny tranokala mahantra amin'ny alàlan'ny fanalàna ireo orinasa maromaro.
Mba hijery an'io endriky rindrankajy io, mila mijery ny mpifaninana ianao. Raha loharanon-tranonkala iray napetraka ivelan'ny tsenanao amin'ny alàlan'ny rohy mifandray mivantana amin'ny foto-kevitrao, dia heverina ho toy ny backlink'ny orinasa tsy manam-paharoa.
Tsy ampy ny mametraka backlink amin'ny tranonkala iray hafa. Ny isan'ireo mpampiasa mividy an'ity pejy ity dia afaka manampy ny SEO ihany. Izany no antony raha toa ka misy mpampiasa vitsivitsy misarika ny rohy, ny maha-izy azy sy ny maha-tokana azy dia misalasala.